नेपाली समाजले नदेखेको छुट्टै अग म सग छैन : सरस्वती लामा | bethanchokkhabar.com
नेपाली समाजले नदेखेको छुट्टै अग म सग छैन : सरस्वती लामा
बुधबार, मंसिर ०५, २०७५ | ९:२७:५४ |
धुलिखेल । सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्ड गाउँपालिकामा जन्मिहुर्की यही हावापानीमा बाल्यकाल बिताएकी, गाउँमा घाँस, दाउरा, मेला-पात, हाट-बजार गरी बाल्यकालको केहि समय सोलुखुम्बुमै बिताएपछी काठमाडौ छिरेर सगित क्षेत्रमा जमेकी नेपाली गीत-संगीतको क्षेत्रमा सफल रक गायिका हुन् सरस्वती लामा । सानै उमेरदेखि गीत गाउने रुचि उनमा थियो । काठमाडौ आएपछि अध्ययनको सगै उनले संगीत सिक्न सुरु गरिन् र संगीतमै अध्ययन पुरा गरीन। रक गायिकाको नाताले उनि केहि भल्गर छिन् जुन हाम्रो समाजले पचाउन अलीकति गार्हो मान्छ । देश विदेशमा आयोजित थुप्रै साङ्गितिक कार्यक्रमहरु उनले भ्याईसकेका छन् । छोटो समयमै धेरै नेपाली र विदेशिहरु समेतको फेवरेट बनेकी सरस्वती लामा एक समाजसेवी पनि हुन् । केहि सामाजिक संघ-संथामा समेत आवद्द उनको ३ दर्जन भन्दा धेरै गीतहरु रेकर्ड भईसकेको छ । उनको पहिलो गिति एल्वम उत्तर-पुर्व हो त्यहि एल्वमको उडिजाने गित वाट दर्शकले उनलाई रक गायिकाको ट्याग दिएका हुन । दोस्रो “उर्वसी” नामक गीति एल्बम पनि बजारमा आईसकेको छ। उनको उर्वसी को शिर्ष गित उर्वसी नै हिट भएको छ। “उडि जाने हावाले” बोलको गीत जस्तै सगित क्षेत्रमा साङ्गितिक हावासगै उडिरहेकी उनै रकस्टार सरस्वती लामा सँग वेथानचोक खवर डटकममा भलाकुसारी :
– म नेपालकै विभिन्न जिल्लाहरुमा भईरहेका मेला महोत्सवहरुमा नै व्यस्थ छु ।
० विदेश भन्दा नेपालमै धेरै कार्यक्रम गर्नुहुन्छ कमाई धेरै हुने भएर हो ?
– दर्शक र श्रोता नै मेरो कमाई हो। उहाहरुको माया सबैतिर छ। म सबैतिर पुग्छु।
० नेपालमा महगी गायिका सरस्वती लामा भन्ने कुरा छ साचो हो त ?
– महङ्गो खासै छैन । म गएको दिन कार्यक्रम मा उपस्थित भएका दर्शक सग तुलना मात्र नै गरेपनि महगो देखिदैन ।हुनसक्छ अायोजकले अरुलाई भन्दा वढि दिनुपरेको गुनासो गर्नुहोला तर दर्शकको उपस्थिति देखेपछि सबै विर्सनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
० अग प्रदर्शन गरेर हगामा मच्चाएको आरोप छ तपाईलाई के भन्नुहुन्छ ? दर्शक तपाईको अगमात्र हेर्न आउने हुन त ?
– मलाई अग प्रदर्शन गर्नु जरुरि छैन र खासै गरेको पनि हुदिन मात्र अरुभन्दा केही खुलेको चै हो ।नेपाली समाजले नदेखेको छुट्टै अग म सग छैन ।दर्शकलाई नराम्रो नै लागेको हो भने मेरो कार्यक्रमहरुमा टिकट नपाएको सम्मको समाचारहरु तपाईहरुलाई नै थाहा छ। मेरा दर्शकहरुले पचाउन नसक्ने अश्लिलता म सग छैन। दर्शक मेरो प्रस्तुति हेर्न आउनुहुन्छ । कार्यक्रममा रमाउनु हुन्छ त्यति नै हो कार्यक्रममा आउनुभएका सबै दर्शकलाई मैले देखाउने प्रस्तुति नै हो । अरु खास स्पेशल केही हुन्न वाकि आयोजकहरुले के देखाउनुहुन्छ मलाई थाहा हुन्न।
० मेला महोत्सवहरुमा आजभोलि कलाकारहरु पनि ठगिन्छन रे साचो हो ?
– सवै आयोजकहरु खराव नै पनि हुदैनन कोहि कसैले सबै कलाकारहरुलाई सम्मान नगरेको पनि पाईएको छ । वास्तवमा कलाकारहरुलाई भनेजति पारिश्रमिक नदिने वा कलाकार सम्म आयोजकले छुट्टाएको रकम नपुग्ने भन्ने कुरा हो । कोहि कसैले आयोजकलाई नै ठगेका पनि हुन्छन चाहिने भन्दा वढि सेवा सुविधा लिएर त कोहि ती सुविधा नपाएर ठगिएका हुन कि भन्ने लाग्छ मलाई ।
० तपाई लाई कहि कतै यस्तो परिस्थिति अाएको छ ? सचेत हुनु जरुरि देख्नुहुन्छ ?
– मलाई खासै त्यस्तो परेको छैन । कहिकतै यसो कम गरिदिनुस न भन्ने चै हुन्छ ।तर मलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराएपछि यस्तो स्थिति आउदैन होला जस्तो लाग्छ । विश्वाश गर्न नसकिने ठाउहरुमा अाफै सचेत भएर पारिश्रमिक प्राप्त गरेर मात्र कार्यक्रमहरुमा जान पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हो । कलाकारहरुको कर्म र मर्म वुझ्नुहुन्छ सबैले भन्ने मेरोअपेक्षा हो ।
० यसपालिको जाडो मा कुन कुन जिल्लाका तन्नेरिहरुलाई तताउनु हुन्छ ?
– चितवन ,रुकुम ,सुर्खेत, भैरहवा आदी ठाउहरुमा जादैछु । तन्नेरि मात्र हैन वुवाआमा दाजुभाई दिदिवहिनि काकाकाकि सबै तात्नुहुन्छ भन्ने आशा छ ।
० हेर्दा खाईलाग्दो देखिनुहुन्छ घायल वनाउने रुप छ युवाहरुले कत्तिको सताउछन ?
– आजसम्म मैले नै युवाहरुलाई सताएको छु जस्तो लाग्छ। तर सामाजिक सन्जालको दुरुपयोग गरेर सरस्वती लामालाई सताउन खोज्नेहरुको चाहिँ कमि छैन । आशा छ हाम्रो कानुन पनि बलियो भाको छ । अब त्यस्तो साहस गर्न सक्दैनन।
० सरस्वती लामा महगि गायिका र पनि सरस्वती लामा उपस्थित नभएको मेला महोत्सव घाटामा जान्छ भन्छन नि हो ?
– म महगि हैन । समय महगो भएको हुनसक्छ । मैले अाफ्नो पारिश्रमिक लिएर मेला महोत्सव मा गई गाएको हुँ। अायोजकहरुले आजसम्म महगो मान्नुभएको छैन ।
– मेरा दर्शकहरू नै मेरो कमाई हो, । सरस्वति लामा दर्शक देश र श्रोताको सदैव सम्मान गर्दछे। यो चिसो चिसो मौसममा मेला महोत्सव विशेष अन्तर्वार्ताको लागि बेथानचोक खबर परिवारलाई बिशेष धन्यवाद ।
पछिल्लो २४ घण्टामा काभ्रेमा ४१ जनामा कोरोना संक्रमण, ७८ जना संक्रमणमुक्त, ३ जनाको मृत्यु
५० प्रतिशत अनुदानमा नमोबुद्धका कृषकलाई मौरीघार वितरण
अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको लागि जनप्रतिनिधले सहयोग गरे एक महिनाको सेवा सुविधाबापतको रकम
आजबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको सेवा सुचारु : बार अनुसार स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह गरिने
केहि क्षेत्रमा खुकुलो गर्दै काभ्रेमा एक साता निषेधाज्ञा थपियो
काभ्रेमा आज ३७ जनामा कोरोना संक्रमण, ६० जना संक्रमणमुक्त, २ जनाको मृत्यु
आ.व २०७८/०७९को लागि धुलिखेल नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब १५ करोड १५ लाख
स्वस्थ शरीरका लागि ‘गर्रौँ योग, बनौँ निरोग’
कोरोनाका कारण आर्थिक संकटमा परेका विपन्न परिवारलाई युवाहरुले गरे राहत वितरण